Myanmar Defence Weapons: ဘင်္ဂလားဒေ. ရဲ. တပ်မတော်နည်းပညာ
ကျွန်တော်တို.ရဲ.ရန်သူ ဘင်္ဂလားဒေ. နိုင်ငံရဲ. တပ်မတော် နည်းပညာ အကြောင်းပြောချင်ပါတယ် ဘာလို.လဲဆိုတော့ သူတို.က ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနဲ. အလိုလျောက်ချိနရွယ်ပစ်ခတ်စနစ် တီထွင်နိုင်လို.ပါဘဲ။သူတို.နည်းပညာက ဒီလိုပါ M56 ၁၀၅မမ အမြောက်ကို အမျိုးစား၆၂ တင့်ကားပေါ်တင် ပြီးတော. အမြောက်ရဲ.ထောက်တွေကိုဖြုတ် အမြောက်ဘေးပတ်ပတ်လည်ကနေ သံပြားဂဟေဆော် ပြီးတော. အပေါ် ၁ ပေါက် ဘေး ၁ ပေါက်ဖောက် ဒါပါဘဲ သူတို.ရဲ.မဟာနည်းပညာကတော. ထွင်လည်းထွင်တပ်ပါပေတယ်။
M56 105မမ အမြောက်